Waan iibiyay wax walboo aan haystay si aan Yurub u tago - hadda dalkeyga ayaan joogaa, waana faro maranahay - BBC News Somali
Waan iibiyay wax walboo aan haystay si aan Yurub u tago - hadda dalkeyga ayaan joogaa, waana faro maranahay
Lahaanshaha sawirka COLIN FREEMAN
In ka badan 3,000 oo muhaajiriin Nayjeeriyaan ah oo ku guul-darreystay inay gaaraan Yurub, ayaa waxaa dalkooda dib ugu celiyay Ururka Caalamiga ah ee Socdaalka. Intooda badan waxay iibiyeen wax walba oo ay haysteen si ay u tahriibaan mana aysan aqoon sidii ay u wajihi lahaayeen qoysaskooda.
Evans William ayaa inoo sheegay inuu iibiyay wax walba balse uu ku guul darreystay riyadiisii ahayd inuu gaaro Yurub. Wuxuu iibiyay wax walba - sariirtiisa, faranjeerkiisa, telefishinkiisa, dharkiisa iyo teleofonkiisa gacanta. Kaddib markii uu lacag dheeraad ah deynsaday, wuxuu ugu dambeyn awooday inuu lacag siiyo mukhallasiin ka qaada Nayjeeriya oo marsiiya Saxaraha kaddibna geeya Libya.
Guud ahaan, waxaa uga baxday £750 ($1,000), balse walwal kama uusan qabin. Mar uun hadduu tago Yurub, wuxuu is tusiyay inuu si degdeg ah u heli doono lacag uu deymaha isaga bixiyo, kaddibna uu ku laabto dalkiisa si uu u bilaabo ganacsi isaga u gaar ah.
Ma ayse noqon sida uu filayay. Kaddib markii uu lix bilood oo dhib badan ku qaatay Libya, halkaas oo maleeshiyo ay ku qasbeen inuu bilaash ku shaqeeyo, ayuu ugu dambeyn badda Mediterranean-ka u soo raacay doon. Waxaa doonta joojiyay ilaalada xeebta Libya, kuwaas oo isaga iyo 140 kale oo rakaab ah ku tuuray xarunta lagu xiro tahriibayaasha.
Markii aanu Evans la kulannay bishii hore, wuxuu markaas ku soo laabtay magaalada Benin ee koofurta Nigeria, isagoo ka mid ahaa boqollaal muhaajiriin ah oo ku sugnaa hotel la dejiyay.
Waxaa dalka dib ugu soo celiyay Ururka Caalamiga ah ee Socdaalka, oo ka tirsan Qaramada Midoobay kaas oo muhaajiriinta sharci darrada ah ka caawiya inay dalkooda dib ugu laabtaan.
Waxaa la siiyay tikid diyaaradeed oo bilaash ah, habeenno dhowr ah oo hotel la dejiyay, iyo £200. Waxaa sidoo kale loo sameeyay tababar xirfadeed, si ay noloshooda dib ugu dhisaan.
Mashruuca ayaa waxaa qayb ahaan £3bn ku maalgeliyay Midowga Yurub sanadkii 2015, sanadkaas oo wararka xasaradaha tahriibku ay warbaahinta qabsadeen.
Image caption Ilaalada xeebta ee Libya oo korjooga howlgal lagu badbaadinayo tahriibayaasha doonaya inay si sharci darro ah u galaan Yurub
Midowga Yurub ayaa rajeynaya in muhaajiriinta oo lagu caawiyo gudaha dalkooda, ay sababi karto in laga dhaadhiciyo inay ka tagaan Libya - halkaas oo ilaa 700,000 oo ku sugan loo maleynayo inay sugayaan inay badda Mediterranean-ka uga gudbaan Yurub.
In ka badan 3,000 oo muhaajiriin Nayjeeriyaan ah ayaa hore u soo laabtay, 20,000 oo kale ayaa iyagana la filayaa inay sanadkan dhexdiisa soo laabtaan.
Balse weli kuwa oggolaaday inay soo laabtaan, ayaan ku qanacsaneyn caawimaadda loo sameeyay.
Badankood sida Evans, ayaa ah kuwo saboolnimo qarka u saaran. Inkastoo ay ku faraxsan yihiin tababarka shaqo ee loo sameeyay, haddana waa waxyaabo iska caadi ah sida hagaajinta timaha amaba harqaanka ama barashada sida beeraha loo tacbado. Kuwii ku taamayay inay Yurub tagaan, waxaasi waxba lama aha.
Waxaa sidoo kale damqinaya, dareenka ah in asaaggood iyo qaraabadooda ay u arkaan kuwo guul darreystay. Kuwo badan ayuu hammigooda u suurto-galay sababtoo ah hooyadood iyo aabbahood ayaa iibiyay hantidii qoyska.
Qofna ma uusan dooneyn inuu wax la`aan soo laabto. Evans, tusaale ahaan, ma uusan dooneyn xitaa inuu dalkiisa ku laabto - inkastoo ay tahay halka keliya ee uu ka helayo sariir uu ku seexdo marka ay lacagta ka dhammaato.
Image caption Tahriibayaasha oo ay baarayaan saraakiil caafimaad kaddib markii ay ku laabteen magaalada Benin, Nigeria
"Weli ma doonayo inaan joogo Nayjeeriya," ayuu inoo sheegay. "marka xigta, waxaan isku dayi doonaa inaan Yurub si sharci ah ku tago."
Sidoo kale waxaa weli murugeysnaa Abibu, oo ah nin dhalinyaro ah oo ay isku diyaarad soo raaceen Evans. Waxaa daqar cusub uu kaga yaallay wejiga, waxaana ku adkaa hadalka.
Hooyadiis, ayuu sheegay, inay iibisay booska dhulka keliya ee ay haysatay si ay ugu maalgeliso safarkiisii Yurub. Xitaa ma uusan u sheegin inuu soo laabtay.
"Haddii ay hooyadey i aragto waxay la xanuunsan doontaa walbahaar," ayuu yiri. "dhammaanna derisku, waxay leeyihiin, 'Ninkan hooyadiis waxay iibisay dhulkeeda si uu u tago Yurub - balse wuu ku guul darreystay!' haddii aan maqlo qof sidaa dhahaya, waxaan kuu sheegayaa inaan dili doono."
Marka muxuu doonayaa inuu hadda sameeyo?
"Hagaag, ugu horreyn waxaan doonayaa inaan lacagteyda dib u helo. Lacagta la i siiyay keliya waa qayb yaroo ka mid ah wixii igaga baxay Libya."
Image caption Haweenka oo Benin, Nigeria ku baranaya sida wax loo kariyo
Kuwee buu Abibu ka helay xirfadihii loo tababaray? Hagaajinta timaha? Beeralley? Wuxuu u muuqday inuu maanka ku hayay shaqo kale. "Waan eegi doonaa xirfadaha," ayuu si cagojiid ah u yiri. "Balse waxaan ka walaacsanahay inaan dembiyo galo si aan lacagta dib ugu helo."
Dhabtii? Dembi noocee ah?
"Dhac ama xatooyo, dabcan."
Wuxuu u muuqday mid ay dhab ka tahay, waxaase wax la is weydiiyo ahayd waxa Abibu uu sameeyay ee daqarka ku jiiday wejigiisa.